Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Slit Seal and Patch Device ပါသောအိတ်စက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် Slit Seal and Patch Device ပါသောအိတ်စက် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ပုံစံ - SV-HC-TS Series
Servo Driven Multilane Bottom Seal နှင့် T-အင်္ကျီအိတ်လုပ်စက်
မက်တယ်။.စွမ်းရည် 140 အပိုင်းပိုင်း/လိုင်းတစ်ခုစီ.
တူညီသောသတ်မှတ်ချက်များကို ပြုလုပ်ရာတွင် လိုင်း4လိုင်းနှင့် 8 လိုင်းအထိ ထပ်တူပြုနိုင်သည်။.
အချက်အလက်ချိန်ညှိခြင်းနှင့်ပြသခြင်းအတွက် Human Machine Interface ဖြင့် အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်.
Sealing bar သည် T အတွက် အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။-အင်္ကျီအိတ် သို့မဟုတ် ရိုးရိုးအိတ်.
အဲ-servo စနစ်ဖြင့်ကျွေးသည်။,မြန်ဆန်လွယ်ကူသော အရှည်ပြောင်းလဲမှု.
ဖြတ်တောက်သောဓားအတွက် စမတ်ကတ်ကြေးများ ညှိနှိုင်းမှုဒီဇိုင်း,သင်၏အချိန်နှင့်ငွေကိုချွေတာပါ။.
ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ထိန်းချုပ်မှု:20FT ကွန်တိန်နာသည် 4sets SS တင်နိုင်သည်။-800VS4 သို့မဟုတ်3အစုံ SS-1000VS4,နှင့် 40FT ကွန်တိန်နာ 8 အစုံ SS တင်နိုင်သည်။-800VS4 သို့မဟုတ်7အစုံ SS-1000VS4 စက်.
လုပ်ဆောင်ချက်များကို တိုးမြှင့်ရန် အပိုပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ပါ။:
ထို့နောက် အစုအစည်းများအတွက် အလိုအလျောက် စားပွဲတင် ပို့ဆောင်ပေးသည်။.
T အတွက် hot pin stack-အင်္ကျီအိတ်.
လိုင်း ၈ လိုင်းအတွက် နောက်ထပ် ပစ္စည်းကိရိယာများ.
အလုံပိတ်ကိရိယာအတွက် အောက်ခြေဆီလီကွန်ဒလိမ့်တုံး,လွှဲပြောင်းခံနိုင်ရည်ကိုလျှော့ချပြီး sealing strength ကိုတိုးစေသည်။.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/bag-machine-with-slit-seal-and-patch-device-1.html
SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူအတွက်အထူးပြု Slit Seal and Patch Device ပါသောအိတ်စက်ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan။ ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တန်ခိုးအဖြစ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကြာပါသည်။ ဒါဟာအဆက်မပြတ်အသစ်ထွက်ကုန်သီးနှံသုတေသန, ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသူ့ကိုယ်သူတင်နိုင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားနိုင်ငံတကာကျော်ကြားကုမ္ပဏီများအတွက်ရေရှည်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။
Slit Seal and Patch Device ပါသောအိတ်စက် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ Slit Seal and Patch Device ပါသောအိတ်စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ